စုချစ်သူ: August 2011
Posted by စုချစ် at 8/31/2011 12:24:00 PM 12 comments: Links to this post
စာရေးဆရာကြီးမောင်ကိုယုဆိုတာ ရှေ့နေလောကမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ ဥပဒေဘက်တော်သားတစ်ယောက်၊ သူဟာရဲရင့်တယ်၊ သတ္တိရှိတယ်၊ ဟာသဉာဏ်နဲ့ ပြည့်စုံတယ်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တယ်။ သူ့ရဲ့ဘ၀သရုပ်ဖော် ဝတ္ထုတွေ၊ ဥပဒေနောက်ခံ ဝတ္ထုတွေ၊ အထူးသဖြင့် သရော်စာတွေဟာ စာချစ်သူတွေ ရင်ဘတ်ထဲမှာ ယနေ့ထိ စွဲမြဲစွာကျန်ရစ်နေတုန်းပါပဲ။
ဟော... အခု ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသစ်ကြီးက သန့်ရှင်းသော နိုင်ငံတော်ကြီး ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ကြတော့မတဲ့။ ဒါနဲ့ ဟိုးတုန်းက ဆရာကြီးဦးကိုယု ရှုမဝထဲမှာ ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ "ဂြိုဟ်သား" ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးကို ဖြတ်ခနဲ သတိရသွားမိတော့တယ်။ အဲသဟာလေးကို စာပေဟာပြောပွဲတစ်ခုမှာ ပြန်ပြောပြသူကတော့ စာရေးဆရာဦးအောင်ပြည့်ပေါ့။
မူရင်းဝတ္ထုစာသား အတိအကျထက် ဆရာဦးအောင်ပြည့်ပြန်ပြောပြတာက ပိုပြီး ဟာသ ရသ ပါလို့ ဆရာဦးအောင်ပြည့် လေအတိုင်းပဲ မှတ်မိသလောက် တိုတိုပဲ ပြောပြမယ်နော့။
တစ်နေ့တော့ ဆရာကြီးဦးကိုယုအိမ်မှာ ရေပိုက်တွေပျက်လို့ အိမ်ပေါ်မယ် ရေလျှံကုန်သတဲ့။ ဒါနဲ့ ဆရာကြီးသားတွေရယ်၊ ဆရာကြီးရယ် ရေပိုက်တွေကို ဟိုပြင် သည်ပြင် ဟိုလှည့် သည်လှည့် ကြိုးစားပြီးလျှောက်လုပ်ကြတာ ကောင်းမလာတဲ့ အပြင် တစ်အိမ်လုံး ရေတွေ ရွှဲနစ်ကုန်သတဲ့။ နောက်ဆုံး စည်ပင်သာယာရုံးက ရေပိုက်ပြင်တဲ့သူ ပြေးခေါ်တော့ စက်ဘီးစုတ်ကလေးစီးလို့ လွယ်အိတ်နုပ်ကလေးလွယ်လို့ ဦးထုတ်အဖာကလေးဆောင်းလို့ ဆေးပေါလိပ်ကလေးလည်း လက်ထဲမယ်ဖွာလို့ အဲဒီရေပိုက်ပြင်ပေးတဲ့သူ ရောက်လာ၊ အိမ်ကလူတွေလည်း သူ့ကို ကူညီပြီး သူလိုတာတွေဝိုင်းကူလုပ်ပေး၊ ရေပိုက်တွေ ကူကိုင်ပေး။ အဲဒီလူကတော့ ရေပိုက်ခေါင်းတွေ ဟိုကတတ် ဒီကဖြုတ် ဟိုကပိတ် သည်ကဖွင့် ဆက်တာဆက် ပြင်တာပြင် စသဖြင့် ၁၅မိနစ်လောက်လုပ်ပြီးရော ရေပိုက်ခေါင်းတွေ အားလုံးကောင်းသွားရောတဲ့။ ဟာ... တတ်တဲ့သူလုပ်လိုက်တော့လည်း ခဏလေးနဲ့ ပြီးသွား ကောင်းသွားတာပဲနော်ပေါ့။
ဆရာကြီးဦးကိုယုတို့ သားအဖတတွေလည်း သူ့ကို ကျေးဇူးတင်လွန်းတာနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မျက်စတွေဘာတွေ ပြစ်ပြက်ပြကြ... လက်ဘက်ရည်ဖိုးလေး ဘာလေး ပေးရအောင်ပါ့။ ဒါပေသိ... ရေပိုက်ပြင်တဲ့သူက သူတို့ပေးတဲ့ပိုက်ဆံကို မယူဘူး... ငြင်းသတဲ့။ နေပါစေ... မလိုပါဘူး ဘာညာ ဆိုပြီး သူ့ပစ္စည်းလေးတွေ သူ့အိတ်ထဲ ကောက်ကက်ထည့် လှေခါးကဆင်း ပြန်သွားသတဲ့။ ဟာ... ပေးတာ နည်းများ နေသလား မသိပါဘူးကွာ... ရော့ရော့... ပိုက်ဆံပိုယူပြီး လိုက်ပေးပါကွ ဆိုပြီး လှေခါးဆင်းသွားတဲ့သူနောက်ကနေ ထပ်လိုက်ပေးကြပြန်ရော။ ကျေးဇူးတင်တာကိုးနော်။
အဲဒီလို အတင်းကာရော ပိုက်ဆံလိုက်ပေးကြတော့ ရေပိုက်ပြင်သမားက လှေခါးကနေ လည်ပြန်ကြည့်ပြီး ရန်တွေ့တော့တာပဲတဲ့။ ဘာတုန်း... ခင်များတို့ သားအဖတတွေ မိုက်ရိုင်းလှချေလား၊ ခင်များတို့က လူကို စော်ကားတာလား။ ကျုပ်ကို ဘယ်လို အစားများ ထင်နေကြတာလဲဗျ။ နိုင်ငံတော် အစိုးရက ကျုပ်ကို လစာပေးခန့်ထားတယ်။ ကျုပ်က ကျုပ်အလုပ်ကို ကျုပ်လုပ်တယ်။ ခင်များတို့က ဘာလဲဗျလို့ ကြိမ်းမောင်းရေရွတ် လှေခါးကနေ ဒုန်း ဒုန်း နဲ့ ဆက်ဆင်းသွားပြီး ဒေါတွေခွီးလို့ စက်ဘီးကိုလည်း ဒုန်း ဒိုင်း မြည်အောင် ခွစီးပြီး ထွက်သွားတာပေါ့လေ။ ဆရာကြီးတို့ သားအဖ တတွေလည်း ရုတ်တရက်ဆိုတော့ ကြောင်ကြည့်ပြီး ကျန်နေခဲ့ကြတာ ခဏနေတော့မှ ဆရာကြီးက... သတိဝင်လာပြီး ဘာပြောလိုက်သလဲ ဆိုတော့...
''ဟ့... သားရေ... လိုက်ဟေ့... လိုက်ဟ... အဲသဟာ... လူမဖြစ်နိုင်ဘူး... ဂြိုဟ်သားဖြစ်လိမ့်မယ်။"
အို... ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တို့ကတော့ ဂြိုဟ်သားများနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားမယ့် နိုင်ငံတော်သစ်ကြီးကို ကြိုဆိုဖို့ အသင့်ပါပဲ။
Posted by စုချစ် at 8/24/2011 12:26:00 PM5comments: Links to this post
Posted by စုချစ် at 8/18/2011 11:39:00 AM4comments: Links to this post
34th year of Elvis Presley Remembrance
He died at aged 42, August 16, 1977
Whenever I see him, I feelagreat pity for him...
I sketched him with this kind of feeling....
Posted by စုချစ် at 8/16/2011 09:38:00 AM2comments: Links to this post
၁၄ - ၀၈ - ၂၀၁၁
နှုတ်ခမ်းများမှာ တောက်ပတဲ့ အပြုံးနဲ့...
ဘာကြောင့် မျက်လုံးများ ငိုနေကြလဲ...
အရင်ဆုံး မင်းကို လွမ်းပါတယ်...
Posted by စုချစ် at 8/14/2011 10:51:00 PM No comments: Links to this post
Posted by စုချစ် at 8/10/2011 08:27:00 AM2comments: Links to this post
ဒို့ အရေး... ဒို့ အရေး...
''ဟေ့ရောင်... မင်း မိန်းမ ကြောက်ရသလားကွ...''
သူငယ်ချင်းတွေက ဒီလိုအမေးမျိုးနဲ့ စူးစမ်းလာတိုင်း ကိုရေချမ်းတစ်ယောက် မကြားချင်ယောင်ဆောင်သလိုလို ဂရုမစိုက်သလိုလို ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ ဘာမှပြန်မပြောပဲ ပြုံးတုံ့တုံ့နေလေ့ရှိတယ်။ တခါတခါ သူမလုပ်ချင်တာ တွေကို မိန်းမအကြောင်းပြပြီး ငြင်းလို့ ကာလို့ ရနေတော့ မိန်းမ ကြောက်ရတယ်လို့ လူတကာက ထင်နေတာပဲ တမျိုးတော့ ကောင်းသလိုလို...။
'' မင်းကြည့်ရတာ အတော်ကြောက်နေရတဲ့ ပုံစံမျိုးပါကွာ...''
မြုံစိစိ လုပ်နေတာကို မဖြေမချင်း ထပ်ကာ ထပ်ကာ မေးရုံမက မဖြေ ဖြေအောင် စွပ်စွဲလာပြီဆိုရင်တော့ တကယ်လို့ ဘေးနားမှာလည်း မရွှေစုပါ ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့...
'' ဟေ့ရောင်... ငါက မင်းလို ကြောက်တာ မှုတ်ဖူးကွ... ချစ်တာ... ချစ်တာ... ''
အဲသလို ဆောင့်ကြီး အောင့်ကြီး ပုံစံနဲ့ ပြန်ဖြေလေ့ရှိတယ်။ သူ့ သူငယ်ချင်းတွေကလည်း မခေပါဘူး။
'' အေးပါကွာ... ငတို့ နားလည်ပေးပါတယ်... မရွှေစုက မိန်းမ ကြောက်တယ် မပြောရဘူးလို့ မှာထားတယ် မှုတ်လား... ငါ့ကောင်ကြီးရာ... '' လို့ မနိုင်နိုင်အောင် ပြန်ပြောကြတာပဲ။
ဟိုတစ်နေ့က သူ့သူငယ်ချင်းတွေ တွေ့ကြတဲ့ပွဲ မရွှေစုက နေမကောင်းလို့ မလိုက်နိုင်ဘူး။ ကိုရေချမ်းက ပျင်းလို့ မသွားချင်ဘူး။ အကြောင်းပြချက်ကတော့ မရွှေစု တစ်ယောက်ထဲ ထားခဲ့ရမှာမို့ မလာတော့ဘူးပေါ့။ တကယ်တမ်း သူ့ဘာသာ ပျင်းပြီး မသွားချင်တာ မရွှေစုတို့က သိပြီးသား။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ပြောပြီပေါ့... ဒီကောင် ... မိန်းမ မလွှတ်လို့ မလာဘူးပေါ့...။ မရွှေစုတို့ကတော့ ဒီလို ကိစ္စတွေ ခံရပေါင်းများလို့ မကျေနပ်နိုင်ဘူး။ တကယ်လည်း ကိုယ့်ကို မကြောက်ပဲနဲ့ ကြောက်တယ် အထင်ခံနေရတယ်။ လူတွေမေးတော့လည်း ကိုရေချမ်းက မိန်းမ ကြောက်ရပါတယ်လို့ ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လေးတောင် ဘယ်တော့မှ မပြောဘူး။ မဖြစ်ဘူး... မဖြစ်ဘူး.. ဒီကိစ္စ ဒီည အပြတ် ရှင်းမှ ဖြစ်တော့မယ်။
'' ဒီမယ်... ကိုရေချမ်းရဲ့...''
ထမင်းလုံးစီပြီး မျက်လုံးမှေးစင်းကာ အိပ်ဖို့ပြင်နေတဲ့ ကိုရေချမ်း တစ်ယောက် ရုတ်တရက် ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ခပ်စွာစွာ အသံကြောင့် မျက်လုံးကို မဖွင့်ချင် ဖွင့်ချင် ဖွင့်ကြည့်ရတော့တယ်။
'' သူများ ပြောမယ်... နားထောင်ပေးပါ... ''
'' အေးအေး... ပြောပြော... နားထောင်နေတယ်...''
'' နောက်တစ်ခါ သူများတွေက မိန်းမ ကြောက်ရလား မေးရင် ကြောက်ရတယ် ဖြေပါ...''
'' ဟန်... ဘာလို့တုန်း... ''
အဆက်အစပ်မရှိ ပြောလာတဲ့ စကားကြောင့် ကိုရေချမ်းတစ်ယောက် အနည်းငယ် မျက်စိကျယ်သွားတယ်။ သူ့စိတ်ထဲ တစ်သက်လုံး ထင်နေတာက မရွှေစုက သူ့ ကြောက်ရတယ်လို့ ပြောရင် မကြိုက်ဖူးလို့ပဲ မှတ်နေတာကိုး။
'' ကိုရေချမ်းတို့ဟာလေ... လှတောသားတွေလောက်တောင် မရိုးသားဘူး...''
'' လှတောသားက ဘာဖြစ်လို့လဲ...''
'' လှတောသားက ပြောတယ်လေ။ လှတောသားတွေ မိန်းမကြောက်ရလားလို့ မေးတော့... အမလေး... ကျနော်... မိန်းမ ကြောက်ရပုံများတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ...ဆရာကြီးရယ်တဲ့... မိန်းမကိုကြောက်ရတဲ့အတိုင်း ငယ်ငယ်တုန်းကဆရာမကို ကြောက်ခဲ့ရင် အခုနေ ပါရဂူဘွဲ့ ၁၀ခုလောက်ရလို့ ပရော်ဖက်ဆာကြီး ဖြစ်နေလောက်ပြီတဲ့... ကဲ...''
'' ဟားဟား... ဟားဟား... မိုက်တယ်ဗျာ... အဲဒီတော့ ကျနော်လည်း အဲသလို ပြောရမှာလား...''
'' အမယ်... မလှောင်ပါနဲ့... ကိုရေချမ်းတို့က မိန်းမကြောက်ရတယ်ဆိုတာ ဂုဏ်ငယ်တယ်များ ထင်နေတာလား... ဆရာကြီးဦးမင်းနွယ် ပြောတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး အဘိဓမ္မာဆိုတာ ပြောပြရမလား...''
'' ကဲ... ဆိုပါဦး...ဆရာမရယ်... ''
'' သူ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကတဲ့... အိမ်လည်းမကပ်၊ မိန်းမကိုလည်း လခ အပြည့်မပေး၊ ပေတေပြီးပဲ နေနေတော့ မိန်းမက သိပ်ကိုစိတ်ညစ်နေတာပေါ့။ အဲဒီလူက တကယ်တော့ လူကောင်း တစ်ယောက်တဲ့... ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လို အဲသလို ဖြစ်သွားမှန်း မသိတာတဲ့။ ဒါနဲ့ သူ့မိန်းမပုံစံကြည့်လိုက်တော့ ရုပ်ကလေး သနားကမားရှိပေမယ့် စိတ်ညစ်နေတာမို့ ဖြစ်ကတတ်ဆန်းနေ၊ စိတ်မကြည်တော့ ယောက်ျားကိုလည်း နေ့စဉ် ဆူဆူပူပူတွေလုပ်၊ အိမ်ကို ကြည့်လိုက်တော့လည်း ရှုပ်ရှက်တွေခတ်နေ၊ အဲသာနဲ့ ဆရာကြီးက ယောက်ျားကို ဆူဆူပူပူ မလုပ်ဖို့၊ အိမ်ကိုလည်း သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်လေး နေချင့်စဖွယ်ထားဖို့၊ စားကောင်းသောက်ကောင်းတွေ ချက်ကျွေးဖို့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်လေး နေဖို့ အဲဒီ အမျိုးသမီးကို အကြံပေးခဲ့သတဲ့...''
'' အဲသာနဲ့ ၆လလောက်ကြာပြီး သူတို့ဘယ်လိုနေကြလဲ စုံစမ်းကြည့်တော့ ဒီလူနဲ့တေဖေါ်တေဖက် အပေါင်းအသင်းတွေက စကားတင်းဆိုကြတာပေါ့။ ဒီကောင် ဘာဖြစ်မှန်း မသိပါဘူး။ ပေါင်းလို့ သင်းလို့ မကောင်းတော့ဘူး... အရင်လို ခေါ်လို့လည်း မလိုက်ဘူး။ မိန်းမ ဒီလောက်ကြောက်နေတာ ဆေးများမိနေပြီလား မသိဘူးလို့ ပြောကြသတဲ့...။ ဘာလို့ဆို သူ့မိန်းမက ဆရာကြီးဦးမင်းနွယ် အကြံပေးတဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်တာကိုး...''
'' ဒီတော့ ... ဘာဖြစ်ရမလဲတော့... လိမ္မာတဲ့ တော်တဲ့ မိန်းမတွေကို သူတို့ယောက်ျားတွေ ကြောက်ရတာပေါ့... ဟုတ်တာလုပ်နေတဲ့သူလက်ထဲမှာ ဘယ်သူမှ မဟုတ်တာ မလုပ်ရဲတော့ဘူးပေါ့... အဲဒီတော့ မိန်းမ ကြောက်ရတယ်လို့ ပြောတာ ဘာဖြစ်လဲ... ဂုဏ်ငယ်သွားလား၊ ကိုယ့်မိန်းမ တော်လို့ ကြောက်ရတယ်ဖြစ်တော့ ကိုယ်က ပိုတောင် ဂုဏ်ရှိသွားသေးတယ်... သူများပြောတာ...မှုတ်ဖူးလား... ကဲ... ''
'' အင်း... အင်း... ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ... ဟုတ်ပါတယ်...''
'' ဟင်း... ဒါတောင် မိန်းမကြောက်ရလို့ အောင်မြင်သွားတဲ့ ကမ္ဘာကျော်လူတွေအကြောင်း သူများ ဖတ်ထားတာတွေ ပြောပြဖို့ ကျန်သေးတယ်။ ဒီညတော့ အချိန်မရှိတော့လို့...''
အချိန်မရှိတော့လို့ လို့ မရွှေစုက ဟန်နှင့်ပန်နှင့် ပြောလာတဲ့အခါ ကိုရေချမ်းခမျာ ထိတ်ကနဲနေအောင် ၀မ်းသာသွားမိတော့တယ်။ နောက်ထပ် ဆက် နားမထောင်ရတော့ဘူးဆိုရင် ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ထောက်ခံလိုက်ဖို့က အသင့်ပြင်ထားရသေးတယ်။
'' အဲဒီတော့ နောက်တစ်ခါ သူများတကာက မိန်းမကြောက်ရလားမေးလာရင် ... အေးကွာ... ကြောက်တယ်ပဲ ပြောလိုက်... ကြောက်တယ်... ဘာဖြစ်လဲ...။ ကဲ... ကဲ... အခု သူများ ရှေ့က တိုင်ပေးမနော်.. ဘာလိုက်ဆိုရမလဲဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာ သိနော်... စမယ်နော်... မိန်းမကြောက်ရေး... မကြောက်ရေး...''
'' ဒို့ အရေး... ဒို့ အရေး...''
'' ဟိ...Good!!! My hubby is so smart... now you can be going to sleep peacefully....Good night....!!! ''
နောက်ဆုံးမတော့ ပြောင်စပ်ပြောင်စပ်နဲ့ ပြောပြီး အပြင်ပြန်ထွက်သွားတဲ့ မရွှေစုကို ကြည့်ပြီး ကိုရေချမ်းလည်း လွတ်ပြီ ကျွတ်ပြီဆိုကာ သက်ပြင်းလေးခိုးချ၊ သူ့မိန်းမ ရူးတူးတူး ပေါတောတောကို အလိုလိုက် ခွင့်လွှတ်နေကြအတိုင်း ခွင့်လွှတ်ပြီး သူဆိုစေချင်တဲ့အတိုင်း လိုက်ဆိုတာတွေ လုပ်ပြီးတဲ့နောက် အိပ်ဖို့ ပြင်ရလေတော့တယ်။ နို့မို့ ဆက်ငြင်းနေရင် ဒီည အိပ်ရမှာ မှုတ်ဖူးလေ...။
အိပ်နေရင်းနဲ့တော့ အရူးစိတ်ချမ်းသာရင် ကမ္ဘာကြီး ငြိမ်းချမ်းတယ်လို့များ တွေးနေသေးလား မသိ...။
Posted by စုချစ် at 8/09/2011 11:17:00 AM 10 comments: Links to this post